Sodina sy Tube
Ny famonoana ny fantsom-bozaka vita amin'ny fantsona sy ny fitsaboana hafanana dia matetika ataon'ny hafanana fampidirana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-18
Ny famonoana ny fantsom-bozaka vita amin'ny fantsona sy ny fikolokoloana ny hafanana dia matetika amin'ny alàlan'ny fanafanana fampidirana na fanafanana ny lelafo. Ny masontsivana ara-teknika lehibe dia ny hamafin'ny faritra, ny hamafin'ny toerana ary ny halalin'ny sosona fanamafisana mahomby. Ny fitsapana ny hamafisana dia afaka mampiasa tester ny hamafin'ny Vickers, afaka mampiasa Rockwell ...
Vaovao tsara! Nampiasaina tamim-pahombiazana ny famatrarana tariby laharana faha-3 an'ny orinasa!
Tamin'ny 30 aprily 2018, rehefa vita ny debugging nandritra ny volana maro, dia napetraka tamim-pahombiazana ny mechine tariby laharana faha-3 an'ny orinasa, ary ny filohan'ny orinasa hafa dia nandray anjara tamin'ny famokarana ilay harato tariby voalohany. Ny fitaovana dia azo ampiasaina amin'ny high-qual ...
Ny mpanjifa avy any Aostralia, Singapour, Thailand dia tonga tao amin'ny ozininay nandritra ny fanadihadiana sy fitsidihana roa andro.
Ny mpanjifa avy any Aostralia, Singapour, Thailand dia tonga tao amin'ny ozininay nandritra ny fanadihadiana sy fitsidihana roa andro. Nifantoka tamin'ny tady vy tsy misy fangarony 1x61mm, ∮42mm izy ireo, Nandritra ny famotorana dia nitsidika ny toerana famokarana ireo mpanjifa ary nijery ny fizotry ny famokarana stainles ...
Tuanbo Industry Zone, County Jinghai, Tianjin, Sina